piston indandatho - China Wenzhou Dongyi Imishini
Tribologically izinto ezisizayo ukwakhiwa negesi-Friend ngoba ephansi yamangqamuzana isisindo amagesi piston izindandatho unamathelise igesi ekamelweni kokucindezelwa ka reciprocating compressors. Basuke ngezifiso, mayelana design and impahla, izimo isicelo abafanele zokuwuhluza, igesi umkhakha wemvelo, kanye Petrochemical namakhemikhali izimboni. Amasongo ngokunembile ekhiqizwa futhi uvumele operation okuthembekile ne impilo ende inkonzo ekukhiqizeni umoya ezimbonini kanye izindawo eziningi ...
Izinto Tribologically kunenzuzo
negesi-Friend ekwakheni ephansi yamangqamuzana isisindo amagesi
piston izindandatho unamathelise igesi ekamelweni kokucindezelwa ka reciprocating compressors. Basuke ngezifiso, mayelana design and impahla, izimo isicelo abafanele zokuwuhluza, igesi umkhakha wemvelo, kanye Petrochemical namakhemikhali izimboni. Amasongo ngokunembile ekhiqizwa futhi uvumele operation okuthembekile ne impilo ende inkonzo ekukhiqizeni umoya zezimboni kanye nezindawo eziningi inqubo ubunjiniyela.
Piston izindandatho, umgibeli izindandatho and bands ekhiqizwa in imiklamo ehlukahlukene:
Omunye-ucezu noma segmental ngqo
imiklamo izindandatho indawo futhi uye waklama inhlanganisela ethize izicelo eziyinkinga kakhulu futhi unzima. Lokhu kuphawula kuhlanganisa ukuguqulwa eziningi yimpumelelo kusukela nivame ukuba operation.Pressure non-nivame izindandatho olinganiselayo ayatholakala, lapho kubonakala afanele izicelo umfutho ophakeme futhi piston / umgibeli indandatho inhlanganisela ayatholakala izicelo olucacile.
Elikhulu ububanzi piston izindandatho kuze kufinyelele 47 "(1200mm) kuthiwa ngokwezifiso ekhiqizwa izidingo ezikhethekile. Ububanzi metallic piston lomgadi izindandatho nazo ekhiqizwa, usebenzisa amamaki akhethiwe zethusi noma yensimbi inkatho, lapho nezidingo zokusebenza ngumashiqela.
Previous: piston & induku
Olandelayo: eziveza igobolondo
3921919 Piston Izindandatho
6ct Engine Piston LoMhlangano
Deutz Engine Piston LoMhlangano
Udizili Piston For Sale
Engine Izingxenye Piston Engine LoMhlangano
Mitsubishi Piston Futhi Pin
Piston Futhi Pin
Piston Futhi Pin LoMhlangano
Piston samandla Valve
Piston Ukuze Wave125
Reciprocating Piston samandla Valve
piston & induku